Burburka Geeska Afrika Waa badbaadada Soomaalida - Land Of Punt
Soomaalidu Waxa ay deganyihiin Xeebta labaad ee ugu dheer qaarada Afrika waan dal hodan ah oo kuyaal goob stratajiya. Soomalidu waxay leeyin dhul isufuran oo muhiim u noqonkara kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga, amniga iyo istaraatijiyada guud ee Caalamka isha ku hayo. Se Soomaali ahaan ma jirto nidaam dawli ah oo Soomaalida kala dabaalan kara isdiidooyinka quwadaha iyo dawladaha ku loolamaya.
Dawladaha Geeska ee ay ka midka yihiin Kiiniya iyo Itoobiya waxa ay saameyn aad u taban ku leeyihiin dhulka Soomaalida bad iyo bariba. Ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya iyaga oo aan ka mid ahayn ciidamada Amisom ayey dhulka Soomaalida gaar ahaan Koonfurta soo galeen, iyada oo aanay jirin cid og tiradooda iyo u jeedadooda toona. wali waxa ay ku suganyihiin Dhulka Koonfureed ee Soomaalida. Hawlgalada ay ka fuliyaan waa kuwo lagasoo amro Adisababa iyo Nairobi.. Sidoo kale waxa ay jaangooyaan siyaasada amni, dawladeed iyo dhaqaalaba ee gayiga Soomaalida. Tusaale ahaan; Dawlada Itoobiya waxa ay dhawr-goor dalbatay in lagu wareejiyo amniga iyo ilaalinta xeebta Soomaalida maadaama oo ay hadaba dalal Shisheeye oo ka yimi wadamo aad uga durugsan ay ilaaliyaan kuna baxo qarash ka badan ka ku bixi kara ciidamo Itoobiyaan ah oo amniga xeebtaa suga. Dhinaca Siyaasada ee Soomaalidu waxa ay noqotay; in Guud ahaan siyaasiyiinta iyo ahdaaftooda dawlad hagiseed ba uu ahaado mid Adisababa jaangooyso guud ahaanteeba.
Marka Xaal sidaa yahay, iima muuqato fursad iyo wakhti Soomaalida loogu ogolaado inay si uun madaxa ula-kacaan ilaa qalalaase mandaqada isu-joojiyaa dhaco, ama ugu yaraan Waqooyiga Itoobiya iyo webiga Niilka oo dagaal ka qarxaa inaga mashquulin karo, Indhaham Adisababa ee aan meelkaleba hayn Soomaali mooyaane.
Waxa Geeska laga bilaabay wax loogu yeedhay “ISBEDELADA GEESKA AFRIKA” .Isbedeledaas oo Hor-jooge looga dhigay Abiy Ahmed, wuxuu qaaday talaabooyin badan oo aan u quminayn arimaha Soomaalida, waxaana ka mid ah:
1: Ereteria waxa ay ku heshay isbedelada dhulkeedii ayaa loogu celiyey balse Jabuuti oo dhul ay leedahay ay haysato Ereteria isbedeladu may noqon kuwa kasoo celiya. Bal eeg Ciidamadii Jabuutiyaanka ahaa ee ay dagaalka ku qabsatay Ereteria inay sheegto raq iyo ruux meel ay ku denbeeyeen isbedeladu may noqon kuwo kasoo warama.
2: Ereteria waxa laga qaaday cunaqabatayntii hubka ee saarayd iyada oo aanay kala sinayn Somalia oo lala saaray, arintooduna ay wada-hoos-tagijirtay Monitoring Group -kii Qaramada midoobay u xilsaartay.
Dhamaan qodobadaas iyo kuwa aynaan Xusid oo Geesku faa’idada uu isku koobay, balse inaga uu inaga soo gaadhay Sawiro lala-galo madaxda Soomaaliyeed ayaa jira. waana Sababta talaaba kasta oo kusoo korodhaa tahay mid dhulka ina sii ogolaysiinaysa, dadyowga kale ee Mandaqadana badhaadhe gaadhsiinaysa waana sababtaan aan xalka ugu soo koobay ” ISKU GO’A SIDII SHIINIHII GOOBKA LOO QODAY”
burburka geeska siyaasada geeska siyaasada geeska afrika siyaasada soomalida Soomalida